Wararka - Urban Geophone Array wuxuu soo bandhigayaa Muuqaal Cusub Los Basin
Urban Geophone Array wuxuu soo bandhigayaa Muuqaal Cusub oo ku saabsan Basaska Los Angeles
1 Ogosto 2018 – Iyadoo la adeegsanaayo geophone-yo cabbirkoodu dhan yahay cabbitaan bun ah oo la geeyay qiyaastii bil daarada, koorsooyinka golf-ka iyo jardiinooyinka dadweynaha, cilmi baarayaashu waxay soo ururiyeen xog ku filan si ay ugu oggolaadaan inay khariidadeeyaan qoto-dheerka iyo qaab-dhismeedka biyo xidheennada San Gabriel iyo San Bernardino Los Angeles, Kaliforniya.
Khubarada cilmiga dhul gariirku waxay u maleynayaan in dooxooyinkan biyo mareenka ah ay u dhaqmi karaan “hirar hage” si diiradda loo saaro ugana dabiibo tamarta dhulgariir ka dhaca koonfurta San Andreas Fault, sidaa darteed fahamka qaab dhismeedkoodu waa muhiim in laga caawiyo saadaalinta sida ugu wanaagsan ee ay uga sii gudbin karaan tamarta dhulgariir ceynkaan oo kale ah magaalada Los Angeles. .
Kooxda cilmi-baarista, oo ay kala hogaaminayeen Patricia Persaud oo ka tirsan Jaamacadda Louisiana State University iyo Robert Clayton oo ka socda Machadka Teknolojiyadda ee California, ayaa awood u yeeshay in ay labada khadad khariidad ka dhigaan si ka faahfaahsan daraasadihii hore, sida lagu sheegay warbixintooda oo ku saabsan Waraaqaha Cilmi-baarista ee Seismological Research. Waxay muujinayaan in saxanka San Gabriel uu ka qoto dheer yahay San Bernardino iyo in saxanka San Bernardino uu leeyahay qaab aan caadi ahayn. Persaud iyo asxaabtiisuba waxay kaloo qireen astaamo guntin qoto dheer oo lakabyada qolofta dhulka ah oo laxiriira laba cilladood oo kala ah - Red Hill iyo Raymond cilladaha - oo horey loogu qariyay meelaha kudhow.
Patricia Persaud iyo Mackenzie Wooten, oo ah CalTech shahaadada koowaad, waxay geeyaan node barxadda hore ee hoyga Los Angeles. / Patricia Persaud
"Waqtigaan waa goor hore in la yiraahdo sida natiijooyinkeenu u badali doonaan sida aan uga fikirno kartiyinkaan awoodeenna ay u soo marin karaan tamarta dhul gariirka," ayuu yiri Persaud. "Si kastaba ha noqotee, waxaan ururineynaa xog dheeri ah aagga oo loo isticmaali doono in lagu sifeeyo qaab dhismeedka salka."
Geophones waa aalado u rogaya xawaaraha dhaqdhaqaaqa dhulka galay danab kaas oo loo isticmaali karo in lagu go'aamiyo joomatari ee dhismayaasha ka hooseeya dusha sare ee dhulka. Muuqaalka faahfaahinta qaab dhismeedka qashin-qubka wuxuu u baahan yahay tiro badan oo saldhigyo dhul-gariir ah oo si dhow u kala fog si loo qabto is-beddellada muhiimka ah ee dhismaha wejiga dambe ee wabiga. Nidaamyada 'Geophone arrays' waxay bixiyaan qaab aan qaali ahayn oo macquul ah oo lagu ururiyo xogtan oo ah magaalo dad aad u fara badan, marka la barbar dhigo dhibaatooyinka iyo kharashka geynta mashiinka ballaadhinta ballaadhan, Persaud ayaa sidaas yidhi.
Mid kasta oo ka mid ah 202 nood ee daraasaddan lagu daabacay, oo saddexda sadar ah ee ku teedsan berkedda woqooyi, waxay qiyaas ahaan le'eg yihiin qaxwada. "Waxay culeyskoodu yihiin ilaa lix rodol oo ay ku jiraan qalab wax lagu qoro, baytari iyo rikoodh ay ku wada jiraan hal konteenar," ayuu yiri Persaud. “Si aan ugu dhigno dhulka waxaan qodaynaa god yar oo u oggolaan doona qanjidhada inay ku daboolaan qiyaastii laba inji oo carro ah markii ay si adag u beeran. Inta badan dadka degan agagaarka Los Angeles waxay noo sheegaan inaan dhigno meelkasta oo aan dooneyno, qaarkood xitaa waxay naga caawiyaan qodista godadka; markaa waxaan dooran karnaa barxaddooda oo qiyaastii shan daqiiqo waxaan haysannaa guntinta meesha oo aan wax ku duubeyno. ”
Xaaladaha badankood, milkiilayaasha guryaha waxay ahaayeen "kuwo aad u saaxiibtinimo leh oo la jaan qaadi kara" intii lagu jiray daraasaddan, ayuu yiri Persaud. “Waxa xiisaha leh ayaa ah markii aan helnay jawaab togan isla markiiba way dhowdahay. Deggeneyaasha Los Angeles aad bey uga warqabaan halista dhul-gariirka sare ee gobolkan, waxayna inta badan xiiseeyaan daraasaddayada iyo noodhadhka, waxayna doonayaan inay wax badan ka ogaadaan. Qaarkood waxay ku deeqaan inay ku faafiyaan ereyga ku saabsan daraasadeena baraha bulshada waxayna ku booriyaan asxaabtooda iyo deriskooda inay iyaguna ka qaybqaataan. ”
Noodhadhku waxay si isdaba joog ah u ururiyeen xogta 35 maalmood. Waqtigaan, waxay ogaadeen dhaqdhaqaaqa dhulka cabirka 6 iyo dhulgariir ka weyn oo ka dhacay kumanaan kiilomitir meel u jirta Los Angeles. Xogta qaab-dhismeedka dhul-gariirka ee dhul-gariir ee dhulgariirrada 'teleseismic' waxaa loo isticmaali karaa qaab loo yaqaan farsamada waxqabadka qaata si loo muujiyo dhumucda qolofta iyo dhismayaasha qulqulka gacmeed ee ka hooseeya saldhigga dhul gariirka. Hawlaha qaataha ee laga xisaabiyay qaababka nodal waxay la mid yihiin kuwa laga xisaabiyay xogta bredbandka, cilmi baarayaashu waxay soo gabagabeeyeen, laakiin soojeedka 'nodalray' wuxuu bixiyaa aragti sare oo lagu eegayo dhismayaasha lafdhabarta sida soohdinta udhaxeysa qolofta dhulka iyo gogosha iyo isdhaxgalka u dhexeeya jiinka iyo dhagaxa hoose ee berkedaha
Xagaagan, kooxdii cilmi-baarista waxay ku laabteen California iyagoo dhigaya noodhadh "khadad cusub oo loogu talagalay in lagu buuxiyo aagag kasta oo laga yaabo inuu isbeddel ku yimaado qaabka saxanka," ayuu yiri Persaud. "Waxaan hada geynay seddex muuqaal oo cusub ka dibna waxaan ka soo aruurineynaa natiijooyinka dhamaan astaamaheena si aan u soo saarno qaab dhismeed casriyeysan oo togga ah."